I-FSX epheleleyo nepheleleyo eneenkcazo zokucwangcisa iinkcukacha
umbuzo I-FSX epheleleyo nepheleleyo eneenkcazo zokucwangcisa iinkcukacha
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #980 by DRCW
Oku kuhlinzekwe ngu-ESP owaphuhlisa ukucwangciswa kwe-FSX. Uya kufuna ukubhekisela kule ndawo kwaye unayo ikopi kumaxwebhu akho.
Ngolu lwazi isibhakabhaka ngokwenene ngumlinganiselo ekukwazi kwakho ukwenza utshintsho kwi-moya yakho nangaphezulu.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #981 by Gh0stRider203
Oh, ngoko ndiyakwazi ukuxhobisa i-777 yam kunye nabaqashi? mnandi! ^ _ ^ lol
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #982 by Gh0stRider203
Inene ndinento enye enokukwazi ukunceda ngayo ....
njani ekungeneni kwam iindawo zokupaka kwisikhumulo sezindiza? Ngokukodwa, ezinye kwi-KDFW phambi kwe-American Airlines ye-Maintenance Hangar #5 prnt.sc/ie8djp
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #983 by DRCW
Le yindawo enye andizange nditshintshe kwi-FSX, ngoku ndiqhuba ngokubanzi i-P3Dv4 yokuba ilinde elinde i-64 yecampu ye-ESP. Nantsi imfundiso yevidiyo endiyifumene enokuba luncedo. Andizange ndibe nexesha lokuyisebenzisa, kodwa kuzo zonke iividiyo endizibukeleyo, le nto ibonakala iyichaza kakuhle
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-2 inyanga edlulileyo DRCW.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #988 by DRCW
Nantsi isampuli kuwe ye-autopilot ye-autopilot yecopilot yecandelo le-autopilot
fuel_flow_gain = 0.002 // Ukufumana ukuhamba kwamanzi
inlet_area = i-19.6 // i-Square Square, injini yendawo ye-incelle
i -_N2_rpm = i-29920 // RPM, isigaba sesibini secompressor value value
emvaburner_available = 0 // I-Afterburner ifumaneka?
i-reverser_available = i-1 // i-Reverser incruster iyatholakala?
ThrustSpecificFuelConsumption = I-0.385 // Thrust i-fuel consumption (Jets)
EmvaBurnThrustSpecificFuelConsumption = 0 // TSFC ngokutsha emva kokutsha
I-afterburner isetyenziswe ku- = 1) I-0 ithetha ukuba buxoki kunye ne-1 ithetha inyanisekileyo, unokufuneka ukwandise injini yakho Static_ Thrust = izicwangciso kunye. Ndiza kudala iposi kwisifundo ngokukhawuleza.
Ixesha ukwenza page: 0.269 imizuzwana